Metro Istanbul Handray mpiasa 27 Mpiasa sembana | RayHaber | raillynews
HomeANKAPOBENYJobsMetro Istanbul Hahazo Mpikambana 27 Mpiasa sembana
Metro Istanbul Hahazo Mpikambana 27 Mpiasa sembana
14 / 03 / 2020 Jobs, ANKAPOBENY
metro manakarama mpiasa mpiasa sembana
Ny Metro Istanbul dia mpiasa miisa 15 no miasa, injeniera 7 iray, mpiasan'ny teknika kilemaina ary mpiasan'ny birao 5.
Ao anatin'ny sakelin'ny dokambarotra navoaka, toerana telo samihafa no raisina. Ho an'ny fahazoana injeniera 3 tsy lavorary, ny fahazoana diplaoma amin'ny talen'ny injeniera, ny kilemaina ary ny miaramila mpifaninana dia tsy voatery hiaraka amin'ny fanompoana miaramila.
Ho an'ny fahazoana mpiasa teknisianina 7, ny fepetra momba ny fahazoana diplaoma amin'ny lisea sy ny lisea teknika, dia tsy tokony hiaraka amin'ny fanompoana miaramila ny mpifaninana lahy.
Ilaina ny hahazo diplaoma ho an'ny diplaoma amin'ny ambaratonga ambony na ny mpiara-miasa ary ny fampiasana ny programa birao solosaina amin'ny fahazoana mpiasa mpiasa manana kilemaina 5.
Ny mpiasa rehetra dia tsy maintsy mitoetra ao Istanbul.
Ny fe-potoana apetraka dia ny 5 aprily. Horaisina ny fangatahana amin'ny alàlan'ny tabilain'ny asa maha-Istanbul Metropolitan. Ireo mpirotsaka kosa dia handefa tatitra momba ny fahasalaman'ny fahasembanana mandritra ny fampiharana. Ireo mpifaninana izay ekena ny fangatahana azy dia hasaina hatao.
TCDD dia hamerina ny mpiasa tsy miasa
TEİAŞ handraisana ireo mpiasa manan-kilema
Fanazavana mikasika ny Card Disability And Access Behavior Istanbul
Minisitry ny fitaterana Istanbul Metro Projet Bakırköy - Beylikdüzü Metro Line…
Ny serivisy fitaterana Adana dia manana tobim-piangonana 13 ho an'ny vondrona sembana rehetra…
KARDEMİR Electrode niditra tao amin'ny tsenan'ny tariby tariby
Metrobus sy baomba fampiasa bisy 10 isan-jato noho ny Coronavirus